Mpempe akwụkwọ ndị dị na metal
2018 Aluminom keosisi metal etiti kwụsịtụrụ igbe n'uko
Anyị bụ ụlọ ọrụ pụrụ iche na ahịa, na-arụsi ọrụ ike nye onyinye kacha mma 2018 Aluminom keosisi metal etiti kwụsịtụrụ igbe n'uko. E nyere 2018 Aluminium e ji osisi wuo etiti a kwadoro igbe dị n'elu site na iji ihe ndị dị n'elu na ihe ndị a na-arụ n'oge a na ụkpụrụ ahịa. Wepụta 2018 Aluminom keosisi metal etiti kwụsịtụrụ igbe n'uko bụ ...
2018 A na-achọ ka a kwadoo aluminum dina na akwa taịl nile
Akwadoro site na ọgaranya ngalaba nka, anyị na-enwe ike imepụta, ọkọnọ na ahia 2018 Ji achọ kwụsịtụrụ aluminom dina na n'uko taịl nile. N'ịbụ ndị e ji ọkaibe mee, a na-emepụta ụlọ elu site na otu ndị ọkachamara, nke nwere nnukwu ihe ọmụma banyere ngalaba a. Tupu ezipụ ikpeazụ, anyị nyere 2018 ihe ịchọ mma kwadoro aluminum dina n'ime ụlọ taịl nile na-enyocha site na otu ìgwè nke ...
ime aluminum na-emeghe oghere ụlọ
Anyị na-enye ngwugwu nke imepụta alumini na-emeghe ọnụ ụlọ dị ka aluminom ụlọ na plank ụlọ nke a na-emepụta dịka ọ dị na ụkpụrụ ụlọ ọrụ. Ihe kachasị mma maka ngwa ahia dị iche iche, ụlọ anyị na-emepụta oghere dị n'ime ụlọ dị mfe iji wụnye. Ndị ahịa nwere ike ịmepụta usoro anyị dịgasị iche na nha dị iche iche ma dabere na nkọwa ha na mkpa ha. Dị ka clip ...
Mpempe akwụkwọ ndị dị na metal/Mepee Ihe Nkpọrọgwụ Cell
2018 Egwuregwu aluminum e ji edepụta ígwè ụlọ
Ka anyị wee nwee ike ịga n'ihu na-egbochi ndị ahịa, anyị ụlọ ọrụ na-enye ezigbo ụlọ dị mma nke 2018 Ejiji aluminum aluminom nke mpempe akwụkwọ maka ndị ahịa anyị a ma ama. A na-achọ Ụlọ Ahịa 2018 a na-ahụ maka ụlọ ọgwụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa na họtel. Anyị na-enye ngwaahịa a n'aka ndị ahịa anyị a kwanyere ùgwù na ọtụtụ ọnụahịa bara uru. Ụdị: Ụlọ elu ...
Aluminom kwụsịrị ụlọ
Aluminom kwụsịrị n'elu ebe a na-achọta ya bụ ihe nchịkọta mara mma nke a na-enweta na ngwụcha ọkwa ọkwa dị elu yana ihe ndị na-akpali akpali ma na-adọrọ adọrọ nke na-eme ka ndị a kachasị mma ma chọọ ya n'ahịa. Ọzọkwa, anyị nwere ike ịmepụta nchịkọta a na-ekpo ọkụ nke a na-etinye na kọlọtọ ụlọ na nhọrọ nhọrọ zuru oke dịka ọ na-emepụta ahịa ahịa. Anyị nwekwara ike omenala ...
Ọkpụkpọ na Nkịtị Nkume/Mpempe akwụkwọ ndị dị na metal
Nnukwu ego na-esite na mmiri
N'ihi ndị ọkachamara anyị a ma ama, anyị nwere ike inye nnukwu ego isi mmiri maka olulu mmiri, malls wdg. Nnukwu nnukwu ego a na-eme ka mmiri na-adị na mbara igwe dị n'ebe ọwụwa anyanwụ iji wụnye ma na-echekwa na kpuchie ya na mkpuchi nchebe nke dị elu. Ndị a nnukwu ego n'uko mmiri ...
Ihe osise dị na ihe owuwu/Mpempe akwụkwọ ndị dị na metal
Onu na onu ogugu nke 129
Ka anyị wee nwee ike ijiri ọsọ ọsọ na-egbochi ndị ahịa, anyị ụlọ ọrụ na-enye oke mma nke nkedo na aluminom nke elu 129 n'elu ụlọ ahịa anyị ahịa. A na-achọ nkedo a na-akpọ 129 n'elu ụlọ elu ụlọ ọgwụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ, ụlọ ahịa na họtel. Anyị na-enye ngwaahịa a n'aka ndị ahịa anyị a kwanyere ùgwù na ọtụtụ ọnụahịa bara uru. Ụdị: Ụlọ elu ...
2017 Aluminom perforated clip na ụlọ na Faux osisi agba
N'ịbụ onye a gwara dị ka otu n'ime òtù ndị a ma ama, anyị na-etinye aka n'ichepụta ihe dị iche iche nke 2017 Aluminium nke a na-etinye n'ime okpokoro na Faux woodQux. Ndị 2017 Aluminum perforated clip na ụlọ na Faux osisi agba na-kwetara maka ha siri ike ewu, ezi akụkụ na elu arụmọrụ arụmọrụ. N'ihi ike ya kachasị mma na ndụ ogologo oge, ndị 2017 a ...
2017 Ebube a na-ahụ maka ebe a na-ahụ maka ndị Canada
Ebumnuche anyị na-ekwu maka mkpa ndị na-eto eto nke ndị ahịa anyị site n'inye ha ihe ngwọta na ngwọta kachasị maka 2017 Ebube a na-ahụ maka ụlọ na Canada. Ezubere nke ọma iji mejuo ihe ndị ọkachamara anyị chọrọ, ihe ngwọta anyị maka 2017 Ejiji maka ebe a na-emepụta ihe ngosi nke Canada bụ nke a ma ama na ahịa. Anyị na-enye ọrụ a n'ọnụahịa dị mma na ahịa ....
2017 Aluminom ji achọ square n'uko tile
Anyị na-enye ndị ahịa anyị a magburu onwe ha ọtụtụ ụdị 2017 Aluminium nke a na-achọ ka e jiri ya rụọ ọrụ site na iji GI na aluminom kacha mma. Iji hụ na ọ dị mma, ndị na-eme nnyocha nke ọma anyị na-anwale usoro ihe a dị iche iche. E wezụga na nke a, anyị na-enye usoro a dị iche iche nkọwa na aghụghọ iji izute iche mkpa nke ...
2017 Aluminom metal baffle uko usoro
Nzukọ anyị na-arụ ọrụ n'ichepụta ma na-enye ezigbo mma nke 2017 Aluminom metal baffle roofiling system. Ndị a 2017 Aluminum metal sistem usoro ụlọ na-arụ ọrụ nke ọma ma na-adịgide adịgide na owuwu nke na-enye nkwado dị ukwuu na ngwa eletriki eletriki yana adaba maka ya mfe mmezi na anya na-atọ ụtọ atụmatụ. Anyị 2017 Aluminom metal baffle n'uko usoro bụ ...
2017 China ahia mkpuchi aluminom ụlọ elu dara
Anyị na-eduga na-eweta 2017 China ahia mkpuchi aluminom ụlọ elu na-eme si ezigbo aluminum metal, nke na-adị mfe arụnyere. Ihe ngosi 2017 a China na-eme ka obi sie ndi mmadu ike. Ihe nyocha nke 2017 nke China na-eme ka ndi mmadu kwenye na ulo oru ahia di iche iche, dika ...
Ahịa dị mma nke na-ere ọkụ na-arụ ọrụ n'elu ụlọ
Anyị bụ otu ihe pụrụ iche dị na ahịa, gbalịsie ike iji nye onyinye kachasị mma na-ere ọkụ n'elu ụlọ. A na-eji Ụlọ Ahịa dị elu a na-ere ọkụ na-ere ihe na-eji ihe ndị dị elu na ngwá ọrụ nke oge a na mmekọrịta na ụkpụrụ ahịa ahịa. Ebufe Ahuma ahia nke ugbo elu ugbo elu nke ulo a na-eto ...
Ejiri 2017 kwadoro okpukpu ala nke ugha
Ejiri 2017 kwadoro Ụlọ Egwuregwu Ụgha Egwuregwu Ngwá Ụkpụrụ na-agụnye nchịkọta mara mma nke a na-enweta na ngwụcha nke ọkwa ọkwa dị elu yana ihe ndị na-akpali mmasị ma mara mma nke na-eme ka ndị a kachasị mma ma chọọ ya n'ahịa. Ọzọkwa, ihe ngosi 2017 a kwadoro nke a kwadoro bụ Aluminium nke na-ekwu na Ụgha Egwuregwu Ụlọ Nchịkọta Board nwekwara ike ime ka ọ dị anyị site na mmepụta zuru oke ...
Ngwongwo 2017 na-ekpo ọkụ na-ere ọkụ na-akwado ihe ịchọ mma Krismas
Nzukọ anyị na-arụ ọrụ n'ichepụta ma na-enye ụdị mma ụlọ 2017 dị elu nke na-ere ọkụ na-ekpuchi ihe ịchọ mma Krismas. Ihe ndị a 2017 a na-ere ọkụ na-ekpo ọkụ bụ ndị na-akwado ihe ịchọ mma nke Krismas bụ ndị dị mma nke ọma na ndị na-adịgide adịgide nke na-enye nkwado dị ukwuu maka wiwi eletriki dị iche iche nakwa na ọ dị mfe maka nlekọta dị mfe na anya ụtọ. 2017 na-ekpo ọkụ na-ere ọla ụlọ na-egbuke egbuke ...
Mpi 4mm mezue ngwunye maka Mpempe Mpempe Mpempe Mpempe akwụkwọ
Anyị na-eji ụlọ ọrụ anyị akpọrọ ihe nke ukwuu n'ịmepụta 4mm Mirror Complete Acp For Design Sharor Mirror Panel Panel to customers. Anyị na-enye ndị ọrụ dị iche iche, ụlọ, na ụlọ dị iche iche maka ịrụ na ịmepụta ụlọ ụgha site na iji gypsum dị elu. Ọzọkwa, a na-eme ihe ngosi 4mm a na-ekpuchi acup maka mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ nkwekọrịta n'okpuru stern ...
2018 Aluminium akuku nke a kwadoro n'elu ụlọ
Site n'enyemaka nke ndị na-azụ ahịa anyị, anyị na-enye àgwà ndị ahịa anyị-ụlọ 2018 Aluminium a kwadoro nke a na-akwadokwa ụlọ elu nke dị mma maka ụlọ ahịa na ụlọ obibi ma nwee akụkụ ziri ezi maka nhazi ngwa ngwa. Ndị 2018 Aluminium nke a na-akwadoro ala ndị a na-akwadoo ala ndị a na-enweta site na ndị ahịa a tụkwasịrị obi 'nke ahịa a n'okpuru nlezianya nke ndị na-azụ ahịa anyị. Ewepu na...
Ọhụụ ọhụrụ Metal Wood open ground cell
A na-ekpo ụlọ elu a kwụsịrị site na isi ụlọ site na ígwè grids. Ígwè, ma ọ bụ igwe anaghị agbacha-nchara, ogidi na-arụ ọrụ nke ọma na akwa ụlọ. Ngwá ọrụ metal na-abịa n'ocha ọcha. Ihe ọhụrụ Metal Wood open cell cell na-enye dịgasị iche iche nke nnukwu ngwaahịa ngwaahịa site na ya ọtụtụ akara nke imewe ọzọ na nhọrọ incorporation na tiles, (Lay in and Clip in), ma ọ bụ ...
Ulo elu igwe, Oghere nke oghere nke Aluminom maka uzo okporo uzo
Anyị na-enyere anyị aka ịkwado ụlọ dị elu metal cell, oghere nke Aluminom maka ụlọ ọdụ ụgbọ oloko. Ejiri ngwaahịa anyị nyere mgbe nnukwu nnyocha na mmepe iji mezuo ihe ndị chọrọ n'aka ndị ahịa anyị. Ụlọ anyị a na-agba ígwè cell, a na-emepụta ebe a na-emepụta Aluminom maka ọdụ ụgbọ okporo ígwè site na iji ngwaahịa kachasị mma na nlezianya nke ndị ọkachamara. The awa metal ...
Pvdf na-ekpuchi ihe mkpuchi aluminium maka ụlọ mgbidi
N'ịbụ ndị otu ọkachamara ọkachamara nwere ahụmahụ kwadoro, anyị enwewo ike ịmepụta na ịkwado Pvdf mkpuchi ngwaike metal aluminum maka ụlọ mgbidi. A na-achọ ka a na-achọ Pvdf na-ekpuchi ihe mkpuchi metal aluminum maka ụlọ mgbidi dị iche iche na Ọdụlọtọ, Ụlọọgwụ, Hotels, Imebe, Metro Station, Public Public Utilities etc.. Ụdị: Ụlọ nke Tiles Ebe obibi: Jiangsu, China (Mainland) Aha aha: .. .
FONNOV, a subsidiary of CAIJING. A dynamic company based in China with business activities related to architectural and industrial materials industry. CAIJING is a shareholder of 3 main businesses on manufacturing ihe mgbakwasị ígwè & claddings, aluminum extrusions, yana akpụkpọ anụ. FONNOV, dị ka onye enyemaka, nọ n'ọrụ nke ahịa na ahịa na azụmahịa nke mba ọzọ.
Ihe mkpuchi ndị a na-enweghị atụ
Ihe osise dị na ihe owuwu
Ọkpụkpọ na Nkịtị Nkume
Na-etinye na akwa akwa
Ejiri Ihe Ndị E Ji Eke Akpụkpọ anụ
Mepee Ihe Nkpọrọgwụ Cell
2017 achọ W300 mbara ihu ụlọ maka spandrel
Ngwongwo ngwangwa na-akwụrụ akwa ụlọ
Ntuchi nke kwadoro ihe ngwongwo ígwè a gbasaa
Ahịa 600 * 600 maka ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ
Mara mma nke a na-ahụ maka arụsị nke dị na China
Afọ 10 Ahụmahụ aluminum na-enwu ọkụ na-ada na panel panel 2 'X 2' na SGS